Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin’ny Novambra 2018
Zavakanto & Kolontsaina · Novambra, 2018
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Novambra, 2018
17 Novambra 2018
Fiainana taorian'i Manus: Resaka tamin'i Eaten Fish, Iraniana mpanao tantara an-tsary momba ny fiainana anatiny sy ivelan'ny toby fihazonan'i Aostralia
Mpanoratra Mong Palatino · Oseania
"tsy ampy ny taratasy, tsy ampy ny pensilihazo ary tsy maintsy nangala-taratasy tamin'ny mpiasa aho, tsy maintsy nitady sombin-taratasy aho hosoritsoritana, ary roa taona sy tapany vao afaka namoaka taty ivelany ny sary nataoko aho. Io ihany ny antony tokana mbola nahavelona ahy."
Masoarabo: Taombaovao miavaka!
Ny Taombaovao no fotoana handinihana ny lasa sy hamolavolana drafitra vaovao ho an'ny ho avy. Inona no lazain'ireo bialogera avy amin'ny tontolo Arabo satria manao veloma farany ny taona 2007 izao tontolo izao ary handray ny taona 2008?
Na eo aza ireo Sakana Rehetra, Faly koa i Yemen!
Mpanoratra Noon Arabia · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Navadika ho anaty tontolo Yemenita ilay hira Happy malaza an'i Pharrell William, mampiseho ny fahaiza-mamorona sy ny talentan'ireo tanora Yemenita, ny fanahin-dry zareo mijery foana ny lafitsaran-javatra ary ny hanihaniny.
12 Novambra 2018
11 Novambra 2018
Koety: Avy Any Amin'ny Dokambarotranà Tantara Ka hatrany amin'ny Tantaran'ny Blaogera
Mpanoratra Abdullatif AlOmar · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Maro indray ireo zavatra noresahan'ny blaogera tamin'ity indray mitoraka ity. Anisan'izany ny resaka fahaverezan'ny hery fahaiza-moronana amin'ny famokarana dokambarotra ao Koety, na koa ny resaka lisansa amin'ny zon'ny mpamorona.
10 Novambra 2018
Notoloran'i Sarajevo mariboninahitra maha-olompirenena i Bruce Dickinson
Notolorana ny mahaolom-pirenena Sarajevo amboninahitra i Bruce Dickenson avy ao amin'ny tarika Iron Maiden satria nankahery ny vahoaka tao Sarajevo izy nandritra ny fitsidihany tao amin'ity tanandehibe natao fahirano ity.
08 Novambra 2018
Badiucao, mpanao sariitatra politika, nanafoana tampoka ny fampirantiany tao Hong Kong — avy eo tsy nandrenesam-peo
...ny fomba tsara indrindra hanohanana ireo mpankanto iharan'ny fandrahonana dia ny fanapariahana ny asan'izy ireny hameno ny habaka rehefa ahafahana manao izany....
07 Novambra 2018
Mpanoratra Sokari Ekine · Afrika Mainty
06 Novambra 2018
Lahatsary : India, “Slumdog Millionaire” sy ireo tanàna farahidiny
Mpanoratra Juliana Rincón Parra · India
.Ela ny ela, inty ny sarimihetsika iray tsy mandokandoka ireo vohitra ao amin'ny farany lalina ao India ho toy ny toerana «tsara tsy fahita firy» no sady tsy mampiseho ireo ankosotra sy zavatra atentina izay tsy mahakasika afa-tsy ampahany kely dia kely amin'ireo indiàna mpanarivo, nefa nofinofisin'ny rehetra
05 Novambra 2018
Kambodza-Thailandy : Mitohy ny fifandirana manodidina ny fiangonana Preah Vihear
Mpanoratra Chhunny Chhean · Azia Atsinanana
Ny fiangonana tranainy Preah Vihear, izay, araka ny voalazan'ny UNESCO, niorina tamin'ny taonjato faha-XIe ary natokana ho an'ny Shiva, dia hita ao amin'ny sisintany manelanelana an'i Kambodza sy Thailandy. Loharano nipoiran'ny fifandirana teo amin'ireo firenena roa mpifanolo-bodirindrina ireo ny fananana tanteraka an'i Preah Vihear.